Binance Liquid Swap - Cazoo ဖြင့် cryptocurrencies ဝင်ငွေကိုဘယ်လို
Binance Liquid Swap ဖြင့် cryptocurrencies ဝင်ငွေကိုဘယ်လို
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » Binance Liquid Swap ဖြင့် cryptocurrencies ဝင်ငွေကိုဘယ်လို
tag ကို: Binance အရည်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်, မမြဲသောဆုံးရှုံးမှု, ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေး, မမြဲသောဆုံးရှုံးမှု, အရည်ဖြစ်ရေကူးကန်, Stablecoin, အသားပေး, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အထွက်နှုန်း
စာဖတ်ချိန် -4minuti
ဤသည်မှာဤနေရာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လျှင်ကြိုဆို / ကြိုဆိုပါ။
ဤတွင် Cazoo ၌ငါ cryptocurrencies ၏ဤ All- လျော့နည်း - ထက် - လူဆိတ်ညံသောပြည်သို့ငါ့ခရီး၌ငါ့မှတ်စုများကူးရေးသော။ ငါဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ ဘာလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိမ်းမထားတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့် မျှဝေခြင်းသည်ဂရုစိုက်သည်! ငါသင်ယူခဲ့တာအားလုံး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုဖတ်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သင်ယူခဲ့တယ်။ ရပ်ရွာကိုပြန်ပေးဖို့အချိန်။
တန်ဖိုးထားသလား။ ကျွန်ုပ်၏ရည်ညွှန်းကုဒ်ဖြင့် အကောင့်မဖွင့်ရသေးပါက Binance အတွက် စာရင်းသွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏ရည်ညွန်းမှု ID သည် EIXFBK06၊ သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာနှိပ်ပါ.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Cazoo သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ သင်မတတ်နိုင်သောငွေကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းသည်အမှားမဖြစ်စေပါနှင့်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည် - အကယ်၍ သင်သတိမပြုမိလျှင်သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုခြေရာခံမိသွားလျှင်သင်လုပ်ဆောင်လိုသောလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သင်ရုန်းကန်နေရသည်။ ငါအကြံပေးချက်တစ်ခုသာပေးနိုင်ပြီးသတိထားပါ။
Binance Liquid Swap ဆိုတာဘာလဲ
Binance Liquid Swap သည် cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်သနည်း။
အဘယ်ကြောင့် Binance အရည်လဲလှယ်ရန်?
Binance Liquid Swap ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
crypto pair တစုံအတွက်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက်အမြတ်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
Alexa Voice Remote | ဖြင့် Fire TV Stick Lite Lite (တီဗီထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲ) HD ဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။
Power Bank၊ INIU အလွန်ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော Powerbank 10000mAh Dual Output 3A မြန်နှုန်းမြင့်၊ iPhone Samsung Huawei Xiaomi ETC အတွက် USB C အပေါက် ပြင်ပအိတ်ဆောင်ဓာတ်မီးအားသွင်းကိရိယာ။ [2022 ဗားရှင်း]
Apple iPhone 13 (128GB) - အပြာရောင်
Saphe Drive Mini Speed ​​​​ကင်မရာသတိပေးချက် ကိရိယာသည် အရောင်ပြကွက်၊ ဥရောပတစ်ဝှမ်း မြန်နှုန်းကင်မရာသတိပေးချက်၊ တိုးချဲ့သတိပေးချက်များ ကျူတာစနစ်၊ Bluetooth မှတစ်ဆင့် ထွက်ခွာချိန်တွင် အလိုအလျောက် စတင်သည်။
Samsung Galaxy A52s 5G စမတ်ဖုန်း၊ 6,5 လက်မ Infinity-O FHD+ မျက်နှာပြင်၊ 6GB RAM နှင့် 128GB တိုးချဲ့နိုင်သော အတွင်းမှတ်ဉာဏ်၊ 4.500 mAh ဘက်ထရီနှင့် အလွန်မြန်ဆန်သော အားသွင်းမှု၊ Awesome Black [Italian Version]
Xiaomi Redmi Note 11 - စမတ်ဖုန်း4+ 128GB၊ AMOLED FHD + 6.43" 90Hz မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 680၊ ကင်မရာလေးလုံး 50MP၊ 5000mAh၊ Graphite Grey (IT + အာမခံ ၂ နှစ်) Alexa လက်လွတ်
Aioneus Cable iPhone 1.8M အားသွင်းခြင်း iPhone အားသွင်းကိရိယာ MFi လက်မှတ်ရ Long Lightning Cable၊ iPhone 13 12 PRO Max Mini 11 SE 2020 X XS Max XR 8 Plus76s65 5s 5c iPad အတွက် အမြန်အားသွင်းကြိုး
GoPro HERO10 Black - ရှေ့ LCD နှင့် နောက်ကျောထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပါရှိသော ရေစိုခံလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာ၊ 5.3K60 Ultra HD ဗီဒီယို၊ 23MP ဓာတ်ပုံများ၊ 1080p တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ Webcam၊ Stabilization၊ အနက်ရောင် (အနက်ရောင်)
MagSafe Charging Case ပါရှိသော Apple AirPods Pro
Lightning ချိတ်ဆက်ကိရိယာပါရှိသော Apple EarPods နားကြပ်များ
HP 302 Black၊ F6U66AE၊ 190 စာမျက်နှာ မူရင်း HP Cartridge၊ HP DeskJet 1110၊ 2130 နှင့် 3630၊ HP OfficeJet 3830 နှင့် 4650 ပရင်တာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
Alexa Voice Remote ပါသော Fire TV Stick (TV ထိန်းချုပ်မှုများပါရှိသော) | HD လွှင့်ခြင်း။
Echo Dot (4th မျိုးဆက်) - နာရီနှင့် Alexa - Cerulean ပါသည့် စမတ်စပီကာ
Apple AirPods အသစ် (တတိယမျိုးဆက်)
Apple AirTag4Pack အသစ်
Kingston Canvas Select Plus SDCS2 / 128GB Class 10 microSD ကတ်ပါရှိသော SD Adapter ပါဝင်ပြီး၊ 128GB
JBL GO3အိတ်ဆောင်ဘလူးတုသ်စပီကာ၊ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဒီဇိုင်းဖြင့် ကြိုးမဲ့စပီကာအိတ်၊ IPX67 ရေနှင့်ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊5နာရီအထိ ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ USB၊ အနက်ရောင်
TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio အခြေခံများ၊ အိတ်ဆောင်ပြင်ပ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်၊ USB 3.2၊ 1 TB၊ အနက်ရောင်
2021 Apple iPad (10,2″၊ Wi-Fi၊ 64GB) - Space Grey (9th မျိုးဆက်)
LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD၊ 2022 LED TV နှင့် AI၊ webOS 5၊ HDR၊ Wi-Fi၊ Bluetooth၊ Game Optimizer၊ Google Stadia နှင့် GeForce NOW၊ Google Home နှင့် Alexa တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
TP-Link TL-WA850RE Wireless Wifi Extender Repeater နှင့် Access Point၊ 300Mbps Single Band အမြန်နှုန်း၊ LAN Port၊ သင်၏ Wi-Fi လွှမ်းခြုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ wifi modem ရောက်တာများအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အဖြူရောင်
SanDisk 128GB MicroSDXC မန်မိုရီကတ်နှင့် SD အဒပ်တာ၊ အနီရောင် မီးခိုးရောင်
Imou Indoor Wi-Fi ကင်မရာ၊ 1080P စောင့်ကြည့်ကင်မရာ၊ Siren ဖြင့် ရွေ့လျားမှုကို ခြေရာခံခြင်း၊ လူသိရှိနိုင်သော WiFi ကင်မရာ၊ နှစ်လမ်းအသံ၊ Alexa၊ 2,4G၊ Ranger 2C နှင့် အလုပ်လုပ်သည်
Powerbank 10400mAh၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် LED မျက်နှာပြင်ပါသည့် USB C အိတ်ဆောင်အားသွင်းကိရိယာ Huawei စမတ်ဖုန်းအတွက် အဝင်2ခုနှင့် 3V/5A အထွက်3ခုပါသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် LED အိတ်ဆောင်ပြင်ပဘက်ထရီပါသည့် USB C Portable Charger။ (အနက်ရောင်)
DVB-T2 HD 1080p အသံချဲ့စက် အလိုအလျောက် ချိန်ညှိခြင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုန်းမြေ မျိုးဆက်သစ် HDMI HEVC ပင်မ 10 ဘစ် H265 သည် အခမဲ့ ချန်နယ်များအားလုံးကို DOLBY-DIGITAL + ရရှိသည် (GX1 (မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခလုတ်များ မပါရှိ))
HP DeskJet 2720e၊ ဘက်စုံသုံး ပရင်တာ၊ HP + ပါ၀င်သည့်6လကြာ Instant Ink
Samsung Galaxy A22 5G စမတ်ဖုန်း 6,6 လက်မ၊ Infinity-V FHD+ ရုပ်ထွက်၊ Android 11 မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အနောက်ကင်မရာသုံးလုံး၊ 4GB RAM နှင့် 64GB၊ 5.000 mAh ဘက်ထရီ၊ မီးခိုးရောင် [Italian Version] 2021
Xiaomi Mi Smart Band6Strap (3 pack) အနက်/လိမ္မော်/အပြာ၊ ပေါ့ပါးပြီး ဝတ်ဆင်ရအဆင်ပြေသော၊ TPU ပစ္စည်း၊ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှု၊ အီတလီဗားရှင်း
Blink Video Doorbell + Sync Module2| တွေ့ဆုံပါ။ နှစ်လမ်းသွား အသံ၊ HD ဗီဒီယို၊ အက်ပ် အသိပေးချက်များ၊ စီစဉ်သတ်မှတ်မှု။ Alexa ပေါင်းစပ်မှု | နှင့်အတူရိုးရှင်း ကြိုးတပ် သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့တပ်ဆင်ခြင်း (အဖြူရောင်)
HP 304၊ အနက်ရောင်နှင့် Tri-color၊ 3JB05AE၊ 2-pack Original HP ကျည်တောင့်များ၊ HP DeskJet 2620၊ 2630၊ 3720၊ 3730၊ 3750 နှင့် 3760၊ HP ENVY 5010၊ 5020 နှင့် 5030 ပရင်တာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
NEW'C2Pieces၊ iPhone 11 နှင့် iPhone XR (6.1) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Tempered Glass ၊ Anti-Scratch၊ Anti-Fingerprint Protective Film၊ 9H Hardness၊ 0,33mm Ultra Transparent၊ Ultra Resistant
Fujifilm 16386016 Instax Mini Film Instant Film for Instax Mini Cameras၊ ဖော်မတ် 46 × 62 mm၊ ဓာတ်ပုံ 20 ထုပ်
HP DeskJet 301 Series၊ 561 190၊ 1000၊ 1050၊ 1510၊ 2000 နှင့် 2050 စီးရီး၊ HP Envy 2510 နှင့် 2540 စီးရီးများအတွက် HP 3050 CH4500EE Original Cartridge၊
Duracell - Plus AAA၊ Mini Alkaline ဘက်ထရီများ၊ 12 ထုပ်၊ 1.5 ဗို့ LR03 MN2400
Echo Dot (တတိယမျိုးဆက်) - Alexa ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် စမတ်စပီကာ - Anthracite ထည်
Echo Dot (4th generation) - Alexa - Anthracite ပါသည့် စမတ်စပီကာ
HP 304 Black၊ N9K06AE၊ 120-စာမျက်နှာ မူရင်း HP Cartridge၊ HP DeskJet 2620၊ 2630၊ 3720၊ 3730၊ 3750 နှင့် 3760၊ HP ENVY 5010၊ 5020 နှင့် 5030 ပရင်တာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
Canon PG-545 / CL-546 Ink Cartridges၊ Multipack Blister Security၊ အနက်ရောင်နှင့် အရောင်
TP-Link အတွင်းပိုင်း Wi-Fi ကင်မရာ၊ 1080P စောင့်ကြည့်ကင်မရာ၊ ညဘက်မြင်ကွင်း၊ နှစ်လမ်းအသံ၊ လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံစနစ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကြောင်းကြားချက်များ (Tapo C200)
Cable Charging Case ပါသော Apple AirPods (ဒုတိယမျိုးဆက်)
SOLFAC Bayer၊ ပိုးဟပ်ဂျယ်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ သုံးရန်အသင့်၊ တိကျသေချာသော လေထွက်ပေါက်၊ အက်ကြောင်းများနှင့် ဝှက်ထားသောနေရာများတွင် အသုံးချခြင်း၊ 20g
KedBrok Anti Mosquito Ultrasound 2022 ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကြွက်များအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ခြင်၊ ကြွက်များ၊ အင်းဆက်များ၊ ပုရွက်ဆိတ်များ၊ ပိုးမွှားများ၊ ကြွက်များ၊ လှေးများ၊ ပင့်ကူများအတွက် အာထရာဆောင်း၊4ထုပ်
PFnPO ရှိ DELTAM ဥယျာဉ်
CONOPU 4000V လျှပ်စစ် ခြင်ရာကက်၊ အောက်ခံပါရှိသော USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော ခြင်ဆေး၊ LED မီး၊ နှစ်ထပ်အလွှာ ကန့်လန့်ကာ၊ အင်းဆက်များနှင့် ခြင်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်နိုင်သော အပြာရောင်၊
ကွဲပြားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်းအတွက် Keter Cabinet3ခန်းပါရှိသော Moby ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း
PIC Anti Food Moth Trap - ထောင်ချောက် နှစ်ခုပါသော အိတ် ၃ ထုပ် = ၆ ခု - အစာလိပ်ပြာများအတွက် ကော်ထောင်ချောက်၊ ဖီရိုမိုနီ ထောင်ချောက်များ၊ အစာပိုးဖလံဖမ်းသူများ
Draining Synthetic Grass 7mm 50 Sizes အမြင့် 1 Meter သို့မဟုတ်2Meters Synthetic Lawn တွင်ရရှိနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် 100% Italy (1×1 Meter)
Keter Comfy Chest Brown - 270 L စွမ်းရည်၊ စေး၊ 116,7 x 44,7 x 57 စင်တီမီတာ
0.5 L ပရီမီယံ ပေါင်းသတ်ဆေး ထိပ်တန်း စုစုပေါင်း ပေါင်းသတ်ဆေး Glyphosate အရေးပေါ် အခြောက်ခံစနစ် မူပိုင်ခွင့် တင်ရန်
အိမ်တွင် FORMINIX Bait ANTS GRANULAR ကိုကာကွယ်ပါ။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း အသိုက် 200g၊ ပန်းရောင် Granule
ဂရင်းနစ် ဓာတုမြက်ခင်း အထူ7မီလီမီတာ (3x2 မီတာ လိပ် -6မီလီမီတာ)
ZIG ZAG၊ Spider Insecticide၊ Magnatela၊ Spiders၊ Spiders နှင့် Webs အတွက် မြင့်မားသော အကြွင်းအကျန် အင်းဆက်ပိုးသတ်ဆေး၊ Spider Web ကို ရက် 40 အထိ ကာကွယ်ပေးသည်၊ 500 ml
Keter 9762000 Titan Basso XL ရေစိုခံ၊ လက်မှတ် Ipx3 80 X 44 X 100 H၊ မီးခိုးရောင်၊ 80x44x100 စင်တီမီတာ
ORPHEA ပိုးဟပ်များ၊ ကိုလိုနီများကို ချေမှုန်းပေးပြီး ပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ ပိုးဟပ်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်ထုတ်သည်၊6ထုပ်၊ အဖြူရောင် ဆွဲဆောင်မှု
Raid Liquid Refill၊ အနံ့မရှိသောလျှပ်စစ်ခြင်ဆေး၊2x 36 ml အားဖြည့်ထုပ်၊ ည 120
အပင်နှင့်ပန်းများအတွက် NUTRI 1 ONE NutriONE စုစည်းဓာတ်မြေသြဇာ 1 လီတာ 1000 ယူနစ်
COMPO Fazilo PFnPO၊ Polyvalent Acaricide ပိုးသတ်ဆေး၊ 750 ml၊ ရောင်စုံနှင်းဆီမြေသြဇာ၊ ပြင်းထန်သောပန်းပွင့်များနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေကြီးထွားမှုအတွက် အသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်ပြီ၊ 1 လီတာ
Chicco ခြင်ဆေးခွေ၊ ကလေးခြင်ဆေး၊ အိတ်ဆောင်၊ Ultrasonic၊ တိတ်ဆိတ်ပြီး ဂေဟစနစ်နှင့် အဆင်ပြေသော၊ 3m ထိရောက်သော အချင်းဝက်၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မထုတ်လွှတ်ပါ၊ လက်တွေ့ကလစ်၊ ဘက်ထရီပါ၀င်သည်၊ အဖြူရောင်၊
Keter Manor 4X6 Garden Shed၊ Resin၊ Grey & Terry၊ Shelf 3060 S-5၊5Shelves Modular Shelving၊ Indoor Outdoor။ ပစ္စည်း- ပလပ်စတစ်၊ အတိုင်းအတာ- 60x30x174 စင်တီမီတာ
5 မျောက်များ - အိမ်တွင်းအိမ်တွင်းဥယျာဉ်ပရိဘောဂအတွက် သတ္တုခြင်ဇမ်ပီရွန်တံခါး
besrey အပူခံကျောပိုးအိတ် 30 လီတာ အပူပေးအိတ်၊ Isothermal ကျောပိုးအိတ်၊ နေ့လည်စာသေတ္တာ အစားအစာကို နွေးသည် သို့မဟုတ် အေးအောင်ထားပါ။ စခန်းချ၊ ပျော်ပွဲစား၊ အသားကင်၊ ပွဲများ (အနက်ရောင်)
CONOPU Electric Mosquito Racket၊ 4000 Volt၊ 1200mAh USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော ခြင်ဆေး၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဓာတ်မီး၊3Layers Mesh Protection၊ ယင်ကောင်များကို ထိရောက်စွာ၊ Indoor နှင့် Outdoor အတွက် အကောင်းဆုံး၊ အနက်ရောင်
Autan Food Moths၊ အရွက် ၂ ထုပ်၊ အစာဖလံများနှင့် အစာလိပ်ပြာများကို ဖမ်းစားနိုင်ပြီး ၈ ပတ်အထိ ထိရောက်သည်
MEATER Plus | မီးဖို၊ အကင်၊ အသားကင်အတွက် ကြိုးမဲ့ ကိရိယာဖြင့် မီတာ 50 အထိ Bluetooth သာမိုမီတာ။ iPhone၊ Android၊ iPad နှင့် Tablet တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အီတလီရှိအက်ပ်
Relaxdays Desk Printer Stand၊3ခန်း၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် စက္ကူကိုင်ဆောင်မှု၊ Space Saving Organizer၊ အနက်ရောင်၊ 1 PC
Blumtal Oven ကြက်ကင်ခုံ၊ Stainless Steel ကြက်ခြေထောက်များနှင့် အတောင်ပံများ၊ BBQ ကြက်ကင်ခုံ
COMPO Triple Action PFnPO၊ အဆင်သင့်-အသုံးပြုနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေး-မှိုသတ်ဆေး-Acaricide၊ ချုံပင်နှင့် ပေါင်းပင်အမျိုးအစား အလှဆင်ခြင်းနှင့် ပန်းပွင့်အပင်များအတွက် 750 ml၊
ရေကူးကန် Bestway Flowclear 58619 အတွက် LED မီးများဖြင့် အပန်းဖြေနေသည့် giordano ရေတံခွန်
ThermoPro TP49 Mini ဒစ်ဂျစ်တယ် သာမိုမီတာ Hygrometer အိမ်တွင်း အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စောင့်ကြည့်သည့် အခန်းများအတွက် အိမ်တွင်း အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ စောင့်ကြည့်မှု အဖြူ၊
အတုအယောင် အခြံအရံ 1 x3မီတာ လိပ်စခရင် ORNAMENTAL WINDBREAKER IVY LEAF LAURO OSMANTUS SYNTHETIC ပြုတ်ကျခြင်း ကာကွယ်မှု railing terrace ဘလက်ကွန်ဥယျာဉ်
Albagarden - ပြင်ပနှင့် အိမ်တွင်း ပိုးကောင်များအတွက် ခြင်နှိမ်နင်းရေး ဥယျာဉ် ယင်ကောင်များ တွားသွားသော အင်းဆက်ပိုးမွှားများ ပုရွက်ဆိတ်များ ခြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု ခြင်ထောင် အိမ် မြက်ခင်းပြင် တိရစ္ဆာန်များ အာထရာဆောင်း အသံ 1 Lt
ZFYQ သဲသောင်ပြင်စောင်၊ 200 x 140 စင်တီမီတာရှိသော သဲဆန့် အိတ်ဆောင် ပျော်ပွဲစားထွက်ပွဲအတွက် တံစို့လေးခုပါသော စောင်၊
လသာဆောင်များ၊ ဂိတ်များ၊ ခြံစည်းရိုးများ သို့မဟုတ် နယ်နိမိတ်များအတွက် Square Mesh ပလပ်စတစ်အကာအကွယ်ပိုက်ကွန်၊ Tenax Quadra 10၊ အစိမ်းရောင်၊ 0,50 x5မီတာ
Keter Garden Tool Rack၊ အဝါနုရောင်ရှိသော အညိုရောင်၊ 113,5 X 71,5 X 132 Cm
Zig Zag၊ Vespaio Precision၊ Insecticide Wasps သည် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့် ပက်ဖြန်းပေးသည်၊ နှစ်ထပ်ပေးသော valve၊ ပုံစံ 400 ml၊
Raid Bait Ants ပိုးသတ်ဆေး၊ အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး ၁ ထုပ်၊
အိမ်တွင်ကာကွယ်ပါ Cyperbase Broad Spectrum ခြင်မကိုက်အောင် ကြမ်းပိုးများ ခြင်မကိုက်အောင် ပိုးသတ်ဆေး Flies Fleas Broad Spectrum၊ 1 Liter & Sandokan Bio Tiger Tab Larvicida၊ အဖြူရောင်
Innoliving INN-194 ဂေဟဗေဒလျှပ်စစ် ယင်ကောင်များ
Wasps နှင့် Hornets အသိုက်အတွက် Zig Zag ပိုးသတ်ဆေး၊ 600ml
အပင်များအတွက် Gardemia Neem ဆီ 100% ဟင်းသီးဟင်းရွက် သဘာဝ ပိုးမွှားများ၊ Cochineal၊ ပင့်ကူနီများ၊ ခြင်များ၊ ကြမ်းပိုးများ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို နှိမ်နင်းရာတွင် မှန်ကန်သော အကူအညီ၊ Eco Wide Spectrum Alternative 250ml
4200V Outdoor Electric Mosquito Net ခြင်မီးအိမ်၊ Indoor Mosquito Lamp for Terrace၊ အင်းဆက်များ၊ ခြင်များ၊ ယင်ကောင်များ၊ ဖလံများ၊ မီးဖိုချောင်၊ ဧည့်ခန်း၊ 18W
Lifewit 26 Liters အပူခံအိတ် စျေးဝယ်အိတ် အပူပေး ကျောပိုးအိတ် နေ့လယ်စာ အိတ် Isothermal Food Cooler Bag သည် ပျော်ပွဲစားထွက် / အပြင်ထွက် / BBQ / စခန်းချ / အားကစားပွဲများ / ခရီးသွားရန်အတွက် နွေးထွေးသော သို့မဟုတ် အေးပါ
Binance Liquid Swap သည် DeFi လောကတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသော "liquidity pool" (အခြေခံအားဖြင့်)အရည်ဖြစ်ရေကန်) cryptocurrencies ကုန်သွယ်ရန်။
crypto ၏စျေးနှုန်း အဆိုပါငွေဖြစ်လွယ်ရေကူးကန်ထဲမှာ cryptocurrencies ၏ပမာဏအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်.
Binance Liquid Swap သည် Cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်သည်?
Binance Liquid Swap သည် Cryptocurrencies နှစ်ခုကြားအရောင်းအ ၀ ယ်အခကြေးငွေနှင့်စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထူးဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုသည်။ Crypto ဈေးနှုန်းများကိုမည်သူလွှမ်းမိုးသနည်း။ ကုန်သည်များ, အငွေဖြစ်လွယ်ရေကူးကန်ရန်ပုံငွေဖလှယ်သို့မဟုတ် add ။ အလားတူစွာငွေအရင်းအနှီးများမှရန်ပုံငွေများကိုထည့်။ ဖယ်ထုတ်သောကုန်သည်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ကြသည် (jargon တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် AMM, Automatic Market Maker ကိုမကြာခဏဖတ်လေ့ရှိသည်) ။
Binance Liquid Swap မှတဆင့် cryptocurrencies အကြားအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်လိုသူများသည်၎င်းတို့အားအလျင်အမြန်လဲလှယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုအရာအားလုံးတော့မဟုတ်ပါ။
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း cryptocurrencies လဲလှယ်ပါ- ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရောင်းအဝယ်ငယ်များသည်မည်သည့်ပြန့်နှံ့မှုကိုမျှဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်သော်လည်းပိုမိုကြီးမားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်၎င်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည် slippage လဲလှယ်မှတဆင့်။ ကုန်သည်များသည်တည်ငြိမ်သောစျေးနှုန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကော်မရှင်များကိုခံစားနိုင်သည်။
ငွေသားထည့်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများမှအတိုးများရယူပါရေကန်ထဲသို့ငွေဖြစ်လွယ်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကုန်သည်များသည်ရေကူးကန်အရောင်းအ ၀ ယ်မှရရှိသောအခကြေးငွေအချို့ကိုရရှိပြီး cryptocurrencies အပေါ်အကျိုးစီးပွားခံစားကြလိမ့်မည်။ ကောင်းစွာသတိပြုပါ- ရန်ပုံငွေများကိုရေကန်ထဲမှအမှန်တကယ်ပါ ၀ င်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဖယ်ရှားခြင်းမှရွေးထားသောအတွဲ ၂ ခု၏အချိုးကျအချိုးကျရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ်ခုသာရရှိရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းသာ cryptocurrency ကိုလက်ခံရရှိရန်ရွေးချယ်ပါကသင်ရရှိသည့်ငွေပမာဏမှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။
Binance Liquid Swap ကိုစတင်အသုံးပြုရန်သင်သည် Finance> Liquid Swap သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
Binance: ဘဏ္Financeာရေး> ငွေလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်
အတွင်းပိုင်း၌ထုတ်ကုန်နှစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မည်။ တည်ငြိမ်eသစ်လွင်မှု.
တည်ငြိမ်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် Innovatoin ထုတ်ကုန်
တည်ငြိမ် BUSD နှင့် DAI ကဲ့သို့သော liquidcoin pools များကိုရည်ညွှန်းသည်။
သစ်လွင်မှု ၏ငွေဖြစ်လွယ်ရေကန်ကိုရည်ညွှန်းသည် ပိုပြီးမတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုဥပမာ ETH၊ BTC နှင့် GBP တို့ကဲ့သို့သောငွေကြေးလဲလှယ်နိုင်သည်။
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေရေကန်ထဲသို့ထည့်ပြီးသောအခါသင့်အားပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည် ဝေစုသင်သည်သင့်ကို (အလွန်သေးငယ်သော) အပိုင်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ ထိုငွေဖြစ်လွယ်မှုပမာဏအတွင်းရှိလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကသင်၏ဝေစု၊ သင်၏ဝေစုအပေါ် အခြေခံ၍ ကော်မရှင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ လွယ်ကူသော peasy ။
Binance Liquidity Swap: ထိုငွေဖြစ်လွယ်မှုပေးခြင်းဖြင့်ရရှိသောဝေစု
စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေသည်မနေ့ကပေးခဲ့သောအတိုးနှုန်းနှင့်ကုန်သွယ်ခွန်အားလုံးကိုဖော်ထုတ်သည့်ဖော်မြူလာကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
ဖော်မြူလာ - (မနေ့ကစုစုပေါင်းအတိုးနှုန်း၊ မနေ့ကစုစုပေါင်းကုန်သွယ်ခ) / သန်းခေါင်ယံတွင်စုစုပေါင်းတန်ဖိုး * ၃၆၅ ။
ဒင်္ဂါးပြားစုံတစ်တွဲကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည် Yield Composition ကိုပြသည်။
Binance Liquid Swap တွင်ထွက်ရှိသည့်လယ်ယာမြေအကျိုးအမြတ်များကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း
crypto ရပ်ထားဘာမျှမလုပ်နေတာရှိခြင်းသဘာဝကျပါတယ်ပါသလား cryptocurrencies တွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်ငှားရမ်းခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါလား။
သို့သော်သိရသည်မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ငွေဖြစ်လွယ်မှုအစုအဝေးများသည်စျေးကွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းနှင့်ရေကန်၏အရွယ်အစားကြောင့်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်သည်။ ဤအချက်များက ၂၄ နာရီအတွင်းသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောတန်ဖိုးကိုအကြီးအကျယ်အတက်အကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်တစ် ဦး ဖြစ်လာလျှင်ပင် ငွေထုတ်ပေးသူ ဆုံးရှုံးမှုကိုအန္တာရာယ်မဖြစ်စေရန်၊ ထာဝရဆုံးရှုံးမှုသည်နားလည်ရန်အခြေခံကျသောအယူအဆဖြစ်သည်။
ငါ Binance ကိုစာမရေးသေးဘူးဆိုရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသတိပေးခဲ့တယ် ဒီ link ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း။ မင်းမှာကော်မရှင်ရှိတယ် ၂၀% လျှော့စျေးထာဝရ!
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3212)
€ 189,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4160)
€ 5,94 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1005)
€ 163,00 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9529)
€ 19,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(68307)
€ 34,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(54544)
€ 29,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
GoPro HERO10 Black - ရှေ့ LCD နှင့် နောက်ကျောထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပါရှိသော ရေစိုခံလုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာ၊ 5.3K60 Ultra HD ဗီဒီယို၊ 23MP ဓာတ်ပုံများ၊ 1080p တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ Webcam၊ တည်ငြိမ်မှု၊ အနက်ရောင် (အနက်ရောင်)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(811)
€ 529,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(205499)
€ 18,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Blackview စမတ်နာရီ၊ Mens Womens Fitness Tracker Watch၊ 1,69" သာမိုမီတာ / Pulse Oximeter (SpO2) ပါသော XNUMX" Full Touch Smart Watch / Pedometer / Heart Rate Monitor / Message အကြောင်းကြားချက်များ၊ အားကစား အိပ်စက်မှု စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3773)
€ 35,98 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1931)
€ 287,68 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(32)
Fujifilm 16386016 Instax Mini Film Instant Film အတွက် Instax Mini ကင်မရာများ၊ ဖော်မတ် 46x62 mm၊ ဓာတ်ပုံ 20 ထုပ်
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(134325)
€ 17,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(143408)
€ 14,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5850)
€ 49,86 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Xiaomi Redmi Note 11 - စမတ်ဖုန်း4+ 128GB၊ AMOLED FHD + 6.43" 90Hz မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 680၊ ကင်မရာလေးလုံး 50MP၊ 5000mAh၊ Graphite Grey (IT + အာမခံ ၂ နှစ်) Alexa လက်ဖရီး
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(857)
€ 178,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(34520)
€ 129,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(48)
€ 10,60 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18226)
€ 8,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(141728)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56826)
€ 24,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11329)
LG 32LQ63006LA 32" Full HD Smart TV၊ AI၊ webOS 2022၊ HDR၊ Wi-Fi၊ Bluetooth၊ Game Optimizer၊ Google Stadia နှင့် GeForce NOW၊ Google Home နှင့် Alexa နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော α5 Gen5ပရိုဆက်ဆာပါရှိသော 22 LED TV
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(222)
€ 229,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2377)
€ 9,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11949)
€ 22,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(116531)
€ 14,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 59,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4661)
€ 95,00 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(43834)
€ 23,75 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9533)
€ 15,00 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(70292)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(13286)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3425)
€ 869,80 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(51283)
€ 11,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(44803)
€ 39,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(89735)
€ 12,98 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
2021 Apple iPad (10,2"၊ Wi-Fi၊ 64GB) - Space Grey (9th မျိုးဆက်)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1878)
€ 318,82 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(29511)
€ 16,99 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56594)
€ 29,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(6383)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18653)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(584)
€ 69,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(100011)
€ 14,00 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
NEW'C2Pieces၊ Tempered Glass သည် iPhone 11 နှင့် iPhone XR (6.1)၊ Anti-Scratch၊ Anti-Fingerprint Protective Film၊ 9H Hardness၊ 0,33mm Ultra Transparent၊ Ultra Resistant
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(62200)
€ 5,79 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Echo Dot (4th မျိုးဆက်) - နာရီနှင့် Alexa ပါသည့် စမတ်စပီကာ - ရေခဲဖြူ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4049)
€ 204,98 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
"ဥယျာဉ်နှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေ" ကဏ္ဍမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ Cazoo၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။
အလံများ၊ ရုပ်ထုများနှင့် ပန်းပုများ၊ ရေကန်များနှင့် ရေပန်းဥယျာဉ်များ၊ ပန်းခြံဆိုင်းဘုတ်များ၊ ရေပန်းများ၊ အလှဆင်ခြံစည်းရိုးများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အမျိုးအစားခွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1255)
€ 5,95 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(20722)
€ 109,00 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1084)
€ 14,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3904)
€ 49,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(506)
€ 8,50 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1414)
€ 8,85 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1203)
€ 13,85 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Keter Comfy Chest Brown - 270 လီတာ ပမာဏ၊ အစေး၊ 116,7 x 44,7 x 57 စင်တီမီတာ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1608)
€ 59,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11595)
€ 9,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(367)
€ 19,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(30)
€ 44,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3119)
€ 11,83 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြွေပြား ၆ ပိုင်း + ထောင့် ၂ ခုရှိ STI မြက်ခင်းအစွန်းများ
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1261)
€ 4,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Gardemia Neem Oil for Plants Spray 750ml ပိုးမွှားများကို သဘာဝအတိုင်း တွန်းလှန်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ Cochineal Red Spider Mosquitoes ကြမ်းပိုးအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ ခြင်များကို တိုက်ထုတ်ရာတွင် မှန်ကန်သောအကူအညီ၊ အစားထိုး Eco Wide Spectrum
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(92)
€ 17,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5284)
€ 376,75 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1089)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(762)
€ 24,89 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(201)
€ 29,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(62)
€ 6,39 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Draining Synthetic Grass 7mm 50 Sizes အမြင့် 1 Meter သို့မဟုတ်2Meters ရရှိနိုင်သော Synthetic Lawn အရည်အသွေးမြင့် 100% Italy Made in (1x1 Meter)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1080)
€ 13,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(55)
€ 22,09 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(134)
€ 7,80 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(78)
€ 49,80 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(115)
€ 18,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(310)
€ 61,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(93)
€ 12,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(6990)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(464)
€ 33,25 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(998)
€ 8,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(169)
€ 23,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1435)
€ 90,00 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1964)
€ 3,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ORPHEA ပိုးဟပ်များ၊ ကိုလိုနီများကို ချေမှုန်းပြီး ပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ ပိုးဟပ်များကို ထိရောက်စွာ တိုက်ထုတ်သည်၊6ထုပ်၊ အဖြူရောင် ဆွဲဆောင်မှု
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(191)
€ 5,41 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1231)
€ 11,40 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Lifewit 26 Liters အပူခံအိတ် စျေးဝယ်အိတ် အပူပေး ကျောပိုးအိတ် နေ့လည်စာ အိတ် Isothermal Food Cooler Bag သည် ပျော်ပွဲစားထွက် / အပြင်ထွက် / BBQ / စခန်းချ / အားကစားပွဲများ / ခရီးသွားရန်အတွက် နွေးထွေးသော သို့မဟုတ် အအေးထားပါ။
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2653)
€ 34,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 5,84 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
SOLFAC Bayer၊ ပိုးဟပ်ဂျယ်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ သုံးစွဲရန်အသင့်၊ တိကျသေချာသော လေထွက်ပေါက်၊ အက်ကြောင်းများနှင့် ဝှက်ထားသောနေရာများတွင် အသုံးချခြင်း၊ 20g
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5866)
€ 16,35 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(268)
€ 12,80 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(89)
€ 9,61 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2577)
€ 15,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18013)
€ 159,90 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Lifewit 24 Liters Insulated Lunch Bag Isothermal ရေခဲသေတ္တာအိတ် (Picnics / Outdoors / BBQ / Camping / Sporting Events) အတွက် နွေးထွေးသော သို့မဟုတ် အအေးခံရန် ရေခဲသေတ္တာအိတ် (Grey Backpack)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3268)
€ 25,49 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2093)
€ 9,00 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(347)
€ 589,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1531)
€ 2,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီကိုမျှဝေပါ ဒီအကြောင်းအရာကိုမျှဝေပါ
ယခင်ဆောင်းပါးMetamask - DeFi အတွက်အကောင်းဆုံးပိုက်ဆံအိတ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်
Margin Trading (LEVA နှင့်အတူ) သည် Binance တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
Binance - SEPA ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းငွေလွှဲခြင်း
cryptocurrencies ဝယ်ယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံး app ကဘာလဲ?
! SALE သည် တိုက်ရိုက်လွှင့်နေပါသည်။
20% လျှော့စျေး ကော်မရှင်အပေါ်
သင် Binance တွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်ပါကဤလွှဲပြောင်းကုဒ်ကိုသုံးပါ။
သို့မဟုတ်ဤ link ကိုလိုက်နာပါ။
Merkle သစ်ပင်များ Binance Binance လွှဲပြောင်း Binance ရည်ညွှန်း ID Binance စမတ်ချည်နှောင် Bitcoin ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain Binance ရည်ညွှန်း Code ကို Dapps Defy DEX eth ethereum Ethereum Virtual Machine (EVM) မမြဲသောဆုံးရှုံးမှု Launchpad ပိုင်ဆိုင်မှုအရည် Metamask Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေး NFT nuncio non fungible တိုကင် ပန်ကဆပ် မမြဲသောဆုံးရှုံးမှု အရည်ဖြစ်ရေကူးကန် လုပ်ငန်းခွင်၏အထောက်အထား ရှားပါးသည်။ ရည်ညွန်း Code ကို Smart Chain ကွန်ယက် Binance Ethereum ကွန်ယက် Scott Stornetta ဗဟိုစနစ်များ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချစနစ်များ slippage စမတ်စာချုပ်များ ချစ်တယ် ကဒ်များကိုဆုချပါ Sorare ရှားပါးကတ်များ Sorare စူပါရှားပါးကတ်များ Sorare ထူးခြားသောကတ်များ Stablecoin ဖြူဖြူ Vitalik Buterin ပိုက်ဆံအိတ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အထွက်နှုန်း